Ezona zicelo zintle ze-Android zokuvuyisana noMnyaka oMtsha | I-Androidsis
Ezona zicelo zibalaseleyo ze-Android zokuvuyisana noNyaka oMtsha
Ngokuhlwanje sele singena kuNyaka oMtsha, kungalo mzuzu apho sivuyisana nokungena konyaka omtsha kubahlobo nakusapho. Uninzi lubheja thumela umbulelo olula. Kodwa, sinokhetho olukhethiweyo ngakumbi. Kuba kukho ifayile ye-Izicelo ze-Android ezisinceda ukuba sivuyisane kubahlobo bethu kunye nosapho.
Enye ye Ezona ndlela zixhaphakileyo kukuthumela umyalezo ngoWhatsApp okanye ngeSMS. Kodwa, enkosi kwezi zicelo, loo myalezo wesiko uya kuba ngowona ungaphezulu. Ukukhethwa kwezi ntlobo zezicelo ze-Android kukhule ngokumangalisayo. Emva koko sikushiya ngezona zilungileyo.
Iiapps ezenza ukuvuyiselana noNyaka oMtsha zilula kuthi. Kodwa kwangaxeshanye siqinisekisa ukuthumela into yoqobo kunye neyonwabisayo. Ke asiweli kwimixholo efanayo nabanye. Ukulungele ukufunda ngezi zicelo?
1 Ndiyakuvuyela uNyaka omtsha ka-2018
2 Isakhelo soNyaka oMtsha 2018
3 Nyakhomtsha 2018 amabinzana
4 Amakhadi oNyaka oMtsha ka-2018
5 IKrisimesi ye-GIF
Ndiyakuvuyela uNyaka omtsha ka-2018
Esi sicelo sinenzuzo enkulu yokuba iyahambelana neWhatsApp. Ke sinokuyithumela imifanekiso kunye namabinzana akhoyo kuyo ngendlela elula ngokusebenzisa isicelo sokuthumela imiyalezo kwangoko. Sifumana database enkulu amabinzana kunye neefoto ukuvuyisana nokungena kunyaka omtsha. Ukongeza, kukwakho Iingoma zabantwana zabantwana. Ke sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo.
La ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Nangona sifumana iintengiso ngaphakathi.
Ndiyakuvuyela uNyaka omtsha ka-2021
Umthuthukisi: Iinkqubo ezitsha zeSoftware Android
Isakhelo soNyaka oMtsha 2018
Esi sicelo sikuvumela ukongeza isakhelo seKrisimesi yenzelwe eli xesha lonyaka kwiifoto ozifunayo. Ke ukuba unefoto ofuna ukuyithumela kubahlobo bakho okanye kusapho lwakho ukuvuyela ukufika kuka-2018, kunokuba yinto elungileyo. Kuba uya ku vumela ukunika umfanekiso imbonakalo yobuqu ngakumbi yale mihla. Sinezakhelo ezininzi ezikhoyo kwisicelo. Ke kuxhomekeke kukhetho lwakho ukukhetha enye okanye enye.
La ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Nangona, sifumana iintengiso ngaphakathi.
Ifreyim yeFoto yoNyaka oMtsha ka2022
Umthuthukisi: Ilanga liyayibona inyanga
Nyakhomtsha 2018 amabinzana
Ukucinga ibinzana eliyintsusa kwaye linentsingiselo entle ngaphambi kokufika koNyaka oMtsha ayisiyonto ilula. Ngethamsanqa, sinokukhetha okunje ngesi sicelo esenza ukuba ubomi bethu bube lula kakhulu. Esi sicelo se-Android sisizisela isiseko sedatha esigcwele amabinzana ukuvuyisana noNyaka oMtsha. Kwinto esinayo iindlela ezininzi ezikhoyo. Ukusuka kumabinzana akudala ngakumbi, ukuya kolunye uvakalelo ngakumbi okanye okunye ukonwaba kunye noqobo. Unokufumana ibinzana olithandayo.
Ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Njengakwimeko zangaphambili, sifumanisa ukuba kukho iintengiso ngaphakathi kuyo.
Nyakhomtsha 2021 amabinzana
Umthuthukisi: IiNkqubo ezahlukeneyo 2021
Amakhadi oNyaka oMtsha ka-2018
Esi sicelo usinika amakhadi amaninzi ahlukeneyo esinokuthi sivuyisane nawo kubahlobo bethu kunye nosapho. Isicelo sisinika ikhadi kwaye sinokwenza ngokwezifiso kwaye sihlele iinkcukacha ezininzi. Sinokufaka awethu amabinzana, ukuze ikhadi libe lelakho buqu. Ukongeza, zininzi iindlela ezahlukeneyo, ke sinokuthumela amakhadi ahlukeneyo kuxhomekeke kumamkeli. Inketho epheleleyo esivumela ukuba sichaze iminqweno yethu kunyaka omtsha.
Ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Nangona ineentengiso ngaphakathi.
Ii-GIF ziye zathandwa. Ke zikwindlela elungileyo ukuvuyisana nokufika kwe-2018 kubahlobo nakwintsapho yethu. Esi sicelo sinefayile ye- ingqokelela enkulu yemifanekiso yoopopayi okanye ii-GIFs iyafumaneka ukuba isetyenziswe. Into elungileyo kukuba sinokwabelana ngokuthe ngqo kwi-WhatsApp okanye sibathumele nge-imeyile ukuba sifuna njalo.
Ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Nangona, njengakwizicelo zangaphambili, sifumana iintengiso ngaphakathi.
Umthuthukisi: Inkqubo yeSky Studio
Olu lukhetho lwethu lwezicelo zokuba sivuyisane noNyaka oMtsha Iya kuba yinto elula kakhulu kuwe. Zonke ngoku ziyafumaneka simahla kwi-Android. Siyathemba ukuba uya kuzifumana ziluncedo. Kwaye ukusuka apha, sinokunqwenela kuphela u-2018 omnandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zicelo zibalaseleyo ze-Android zokuvuyisana noNyaka oMtsha
Uluhlu lweenqwelomoya zeXiaomi ezineNFC
Ucingo luhlaziywa ukongeza inkxaso kwiiakhawunti ezininzi kunye neempendulo ezikhawulezayo